Ny fikorontanan'ny taom-baovao - fombafomba ho an'ny harena, fampiakarana vola
Ny Taom-baovao dia vanim-potoana mahagaga, majika ary fahatanterahan'ny faniriana. Tsy mahagaga, nandritra ny taompolo maro, dia nisy ny fikomiana tamin'ny Taom-baovao, fombafomba isan-karazany ho an'ny harena, fanintonana vola, fahasalamana tsara, fahombiazana ary zavatra hafa. Ary mba ahafahan'izy ireo mandray andraikitra, dia zava-dehibe ny mitadidy ny sasany.
Fialan-tsasatra ho an'ny Taombaovao amin'ny vola
Tsy misy na dia tsy mahita ny Taombaovao miaraka amin'ny paosiny foana aza. Tokony ho feno zava-mamy, voanjo ary vola madinika izy ireo.
Ny fialantsasatry ny Taom-baovao dia mihaingo amin'ny akanjo vaovao, ary amin'ny herinandro voalohany amin'ny volana Janoary dia zava-dehibe ny hametraka ny fitafiana akanjo vaovao tsara indrindra. Ankoatra izany, tsy azo atao ny manao firavaka, maneho ny harena sy ny harena.
Ary ity teti-baovao ity dia azo tanterahana amin'ny Krismasy. Raha vantany vao niseho ny kintana voalohany tany an-danitra, ny hazavana rehetra ao an-trano dia tokony hovonoina, ary eo amin'ny varavarankely tsirairay nohazavain'ny labozia. Eo amin'ny varavarankely izay tonga any atsinanana, dia mitsangana izahay ary mamaky izao manaraka izao: "Voninahitra ho an'ny Avo Indrindra! Manome voninahitra ny anjely! Teraka i Kristy ary faly eran'izao tontolo izao. Ny voninahitr'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay ary tsy mihodina, fa manampy volafotsy kosa aho! Amen . "
Ny latabatra fikarakarana dia tokony manana lovia 12. Izy rehetra dia maneho harena, harena ary fahasambarana.
Ho an'ny Taombaovao, ary mandritra ny fe-potoana 1 hatramin'ny 14 Janoary dia mila bitsibitsika imbetsaka ianao mba hihinana sy hisotroana: "Tompo ô, vonjeo aho (anarana)! Tompo ô, ampio aho, (anarana)! Tompo, avelao aho, (anarana), hiaina ny taona ho avy sy be fahasalamana. Amen . " Aza hadino ny manao batisa in-telo fa rehefa miteny ireo teny ireo, ary ny sakafo indray mandeha.
Ny fombam-pahaizana mahomby amin'ny taona vaovao hanintonana harena dia izao manaraka izao: Ny tranombakoka dia voaravaka vola faktiora, ary ambanin'izany dia tsy manadino ny mametraka vola madinika vitsy, izay tsy maintsy manintona ny firoboroboana amin'ny taona vaovao.
Ny vokatry ny fahasimbana eo amin'ny fifandraisana
Famantarana ny fambara
Famotehana generic - famantarana
Plots of Wangi
Famantarana ny fanararaotana sy ny mason'ny olona
Mpangalatra nofinofy - lanjany
Ny teknikan'i Simoron - fombafomba, nohamarinina
Privorot amin'ny zavatra iray
Ahoana no hivarotana ny devoly amin'ny fanahy?
Tattoo amulet ho an'ny zazavavy
Fikorontanana amin'ny aretin'andoha
Ahoana ny fomba hanamboarana sela loko avy amin'ny voa?
Efitra ambin-trano efitrano iray
Hijanona tsy hiantso ireo albums araka ny taona i Adele
Sakafo amin'ny teny Frantsay amin'ny ronono
Ny fametahana ny rantsantanana dia famantarana
Fahatsiarovana ny Koreana - resipe
Hatao eo ambanin'ny akanjo - toy ny karazana headgear haka ny palitao?
Mimosa salady - mahandro sakafo amin'ny fety
Mitondra ao amin'ny efitra fandroana
Saint Tatyana - ny fiainan'ny maritiora masina, ny vavak'i St. Tatyana ho an'ny fahasalamana
Ny baolina majika amin'ny faminaniana momba ny fanapahan-kevitra - fomba fampiasana?
Kozinaki avy amin'ny renirano any an-trano
Wedding akanjo ho an'ny zanaka vavy
Mety misy tazo mandritra ny fitondrana vohoka ve?
Ny ririnin'ny ririnina dia toy ny siderat
Afo misy voninkazo
Nahazo fanomezana mahery vaika i Neil Patrick Harris